Archive du 31-août-2021
Fitokanana kianja nahemotra Norahonan-dRajoelina mafy ny FMF
“Misy ny indro kely satria ny zava-dehibe nanaovantsika io Kianja Barea io, dia noho ireto ekipa nasionaly ireto izay nitondra antsika lavitra
Ny tany Frantsa aloha izany nisy iny tafatafa tafo lanitra nandretirenty tokana ny sainam-pirenena frantsay iny. 2 andro taorian’ny nanaovan’ny
Depiote Fetra Ralambozafimbololona “Efa niongana io fitondrana io raha ratsy saina ny TIM”
Toy ny antoko politika rehetra ny Tiako I Madagasikara, hoy ny depiote voafidy teny amin’ny boriboritany fahadimy, Fetra Ralambozafimbololona,
Mpanazatra Eric Rabe “Banga an’i Morel sy Marco isika, saingy ambony ny moraly”
Nigadona teto an-tanindrazana omaly ireo andiany voalohany tamin’ny Mpilalaon’ny Barea notarihin’ny mpanazatra Eric Rabesandratana.
Ministeran’ny varotra sy fanjifana “Tsy tokony hihoatra ny 2000Ar/kg ny vary nafarana”
Mitohy hatrany ny fandrindrana ny famatsiana ny tsena anatiny ho fiarovana ny mpanjifa, hoy ny Ministeran’ny indostria sy ny varotra ary ny fanjifana.
Fanodinkodinana zaza tsy ampy taona Nentin’ilay tovolahy nandositra ilay zazavavy niandry omby
Nisehoana fandokinkodinana zaza tsy ampy taona ny 19 aogositra teo, tany amin'ny kaominin'Amparibohotra, distrikan'i Soavinandriana, Faritra Itasy.
Madagasikara≠Bénin Mety hivantana amin’ny TVM ihany ny lalao
Nambaran’ny pejim-baovao iray omaly, fa afaka ny hijey mivantana ny lalaon’ny Ekipam-pirenena Malagasy sy ny Ecureuils-n’i Bénin ny vahoaka Malagasy ny 2 septambra lasa teo,
Andranomanalina Nosavoritahan’ny mpanendaka efa-dahy ilay ramatoa
Ramatoa iray 24 taona avy niasa no nendahana lehilahy miisa 04 teny amin'ny Vorodamba omaly ny faran’ny herinandro teo.
Taorian’ny ampamoaka goavana Nandamin-dresaka ny Minisitry ny vola
Nanome toky ny Minisitry ny toekarena sy ny fitantanam-bola fa hisokatra sy hanohy ny dinika fanatsarana sy fandaminana anatiny, hoy ny vaovao nivoaka omaly.
Raoul – Filohan’ny FMF “Ny tantara no hitsara…”
“Mahay sy mahalala ny asany daholo ny mpiara-miasa eo anivon’ny FMF. Ny fitiavana no mibaiko miaraka amin’ny feon’ny fieritreretana ka sarotro ny hino fa misakana ny fandrosoan’ny baolina kitra Malagasy izy ireo.
Nambara fa tsy misy covid-19 intsony Hotaperina amin’izay ny hamehana ?
Efa tsy misy trangana covid-19 intsony eto Madagasikara, raha ny nambaran’ny Filoham-pirenena nandritra ny fahatongavany teny Ivato omaly.
Baolina kitra Malagasy Simbain’ny politika sy hambom-po diso toerana
Tena tsara ny fanandratana avo ny voninahim-pirenena amin’ny alalan’ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena.
Faritra Melaky Omby miisa 3136 no very tao anatin’ny 2 taona
Nahatratra 3136 ny isan’ireo omby very tao anatin’ny 2 taona tany amin’ny Faritr’i Melaky. Fantatra izany nandritra ny fandalovan’ny sekreteram-panjakana
Tontolon’ny Ba gasy Nodimandry i Gaston Andrianony
Misaona ny tontolon’ny mozika Ba gasy satria dia nodimandry omaly maraina teo amin’ny faha 85 taonany ny isan’ny tompon’izany bahan-kira izany fahavelony, Gaston Andrianony.
Bemasoandro Itaosy Afaka handray mpianatra 300 ny EPP nitarina
Nasiam-panitarana ny sekoly ambaratonga fototra ao amin’ny kaominina Bemasoandro Itaosy, distrikan’Antananarivo Atsimondrano.